अत्यन्तै दुखद खबरः हिटरको तातोमा बच्चा बचाएर तड्पिइ तड्पिई ज्यान गयो इञ्जिनियर दम्पतीको जीवन, – PathivaraOnline
Home > समाचार > अत्यन्तै दुखद खबरः हिटरको तातोमा बच्चा बचाएर तड्पिइ तड्पिई ज्यान गयो इञ्जिनियर दम्पतीको जीवन,
admin December 31, 2018 समाचार 0
काठमाडौं । अवकाशप्राप्त सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा लेख्नु भयो, ‘आगलागीबाट गम्भीर घाइते भई उपचाररत् ई. पुष्कर जोशीको निधन भएको छ । दिवंगतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि । आगलागीमा गम्भीर घाइते भएका उपचाररत् जोशीकी पत्नी ई. अप्सरा र नाबालक पुत्रको शिघ्रस्वास्थ्य लाभको कामना ।’
काठमाडौंमै डेरामै जले इञ्जिनियर दम्पती पुसको ठिहिर्याउने काठमाडौं अनि साँझ ६ बजे । जाइकामा कन्सल्टेन्ट रहेका इञ्जिनियर पुष्कर जोशी र सडक विभागमा कार्यरत इञ्जिनियर अप्सरा श्रेष्ठ कार्यालयबाट काम सकेर कोठामा आए । कोठामा ग्यास जोडिएको हिटर तापे । प्याक गरेर ल्याइएको मःम खाए । साथमा डेढवर्षको छोरा पनि थिए । तर त्यही मःम नै यी जोडीको ‘अन्तिम भोजन’ बन्यो । डेराको बास । खोइ कतिखेर कसको नियति कतिखेर के पो हुन्छ ?’
के भएको थियो ? भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘यो अनुमान मात्रै हो हाम्रो, तर यो पीडा हामी कहिल्यै भुल्न सक्दैनौँ ।’ साँझ ६ बजेतिरको घटना । इञ्जिनियर दम्पती डेरामा आए । हिटर तापेर मःम खाँदै थिए । सायद ग्यास लिक भयो र आगलागी भयो । ढोका बन्द थियो । भट्टले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अनुमान हो, उनीहरु ग्यास लिक भएर आगलागी भएकै कारण जलेर मरे, सिलिण्डर विस्फोट भएको छैन, बेड जस्ताको तस्तै छ । तर पुष्कर र अप्सरा आगोको लप्कामा जलेका छन् । डेढ वर्षको छोरो पनि जलेको छ ।’ हिटर पनि त्यही दिन बनाएर ल्याइएको छिमेकीहरुले सुनाए ।
समयमा उद्धार भएन वरपर हल्लीखल्ली भयो । ढोका समयमा खुलेन । ग्यासले जलेर उनीहरु गम्भीर घाइते भएका थिए । ‘पुष्करको दुवै हात हागोको मुस्लोमा परेको देखिन्छ, मेडिसिटीमा दुवै हात काटिएपछि उसको मृत्यु भयो,’ भट्टले सुनाउनु भयो, ‘यस्तो घटना नेपालमा कमै हुन्छ तर हाम्रो उपचार प्रणाली यस्तो रहेछ कि, पैसा भएर पनि मान्छे बाँच्न गाह्रो रहेछ काठमाडौंमा ।’
आगलागी पीडितलाई पहिला स्लाइन जरुरी यो घटनाले सिकाएको अर्को पाठ हो, आगो लागेको मानिसलाई पहिला स्लाइन चढाउनु पर्छ । ‘आगोले शरीरको रगत र पानीको मात्रा सकाउँछ, किड्नीमा असर गर्छ । त्यसैले सक्दो चाँडो पानी दिनु पर्छ,’ इञ्निनियर भट्टले भन्नुभयो, ‘उनलाई तत्काल केही बोतल स्लाइन चढाइएको भए बाँच्ने आसा थियो ।’
आगोले पोले कीर्तिपुर अस्पताल जाउँ काठमाडौं उपत्यकामा आगोले पालेको उपचार हुने अस्पताल हो कीर्तिपुर अस्पताल । काठमाडौंको एउटै मात्र अस्पताल, जहाँ आगोले पोलेको विशेष ढंगबाट उपचार हुन्छ । पुष्कर दम्पतीलाई पनि कलंकीमा भएको घटनापछि नजिकको अस्पताल लगियो । उनलाई शुरुमै कीर्तिपुर अस्पताल पु¥याउन सकिएको भए हुनेथियो । ‘पलपलमा यसो भएको भए बाँच्थ्यो कि भन्ने ‘होप’ले पा हामी तड्पिइरहेका छौँ,’ इञ्जिनियर भट्टले भन्नुभयो, ‘कीर्तिपुर अस्पताल त पु¥याउन सकिएन नै, स्लाइन पनि चढाइएन, उल्टो त्यहाँबाट कीर्तिपुर अस्पताल लैजान पनि बिलिङ र अरु कागज मिलाउँदा ४ घण्टा ढिलो भयो ।’
कीर्तिपुर अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ छैन अनेक व्यवधानबीच पुष्कर दम्पतीलाई कीर्तिपुर अस्पताल लगियो । उनलाई डायलाइसिस गर्नु पर्ने भयो । तर दुःखको कुरा आगलागी पीडितको विशेष अस्पतालमै डायलाइसिस सेवा रहेनछ । त्यहाँ पनि पुष्करको उपचारमा फेरि व्यवधान भयो । आगोले पोलेको पीडामा आफ्ना सहकर्मी अचेत भइरहँदा हरसम्भव प्रयास ग¥यौँ र मेडिसिटी ल्यायौँ । मेडिसिडीमा उपचार क्रममा पुष्करको हात काटियो तर बचाउन सकिएन । १२ गते बिहान पुष्कर बिते,’ भट्टले भन्नुभयो ।
भरपर्दो छैन एयर एम्बुलेन्स सेवा मेडिसिटीमा पुष्कर दम्पतीलाई लैजाँदा तेस्रो अस्पताल ‘चेन्ज’ थियो । अर्थात् निकै ढिलो भइसकेको थियो । मेडिसिटीमा भारत लैजाने सल्लाह भयो । इञ्जिनियर सर्कलमा नाम चलेका दम्पती थिए । खर्च साथीभाइले जुटाएकै थिए । मुम्बइमा अग्निपीडितको उपचार राम्रो हुने खबरपछि त्यहाँ लैजाने तयारी भयो । दम्पतीका लागि दुई वटा ‘एयर एम्बुलेन्स’ पनि जोहो भयो । त्यो पनि ४० लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी ।
तर फेरि आइलाग्यो व्यवधान । ‘मेडिसिटीबाट विमानस्थलसम्म पुर्याउने, त्यहाँबाट एयर एम्बुलेन्समा इन्धन भर्ने काम गर्दा अरु ४ घण्टा उपचारविहीन हुँदा झन कठिन हुने बताए उपचाररत चिकित्सकहरुले ।’ ‘चार घण्टा बाहिर राख्न बिरामीलाई गाह्रो हुन्छ भने,’ भट्टले फेरि दोहोर्याउनु भयो, ‘पैसा भएर मात्रै मान्छे कहाँ बाँच्न बचाउन सकिँदो रहेछ र ?’ उपचारक्रममै अप्सराको पनि १५ गते निधन भयो ।
पैसा जुटेकै थियो इञ्जिनियर दम्पती अस्पताल भर्ना भएपछि इञ्जिनियर सर्कलले उपचारका लागि सक्दो दौडधूप गरेको थियो । ‘पैसा पनि जुटाएका थियौँ, समस्या थिएन,’ भट्टले भन्नुभयो, ‘अप्सराकी बुबाले खातामा सहयोग जुटिरहेको छ भन्नुभएको थियो तर दुवैलाई बचाउन सकेनौँ ।’ फेरि दोहो¥याउनु भयो, ‘पैसाले मात्रै काठमाडौंमा मान्छे बाँच्दैन रहेछ, बचाउन सकिँदैन रहेछ ।’
के सिक्ने यो घटनाबाट ? पुष्कर दम्पतीको इहलीला सकियो । पहिलो, समयमा उद्धार भएन । डेरामा बस्नेहरुको जीवन यस्तो असुरक्षित छ । धन्न ग्यासको सिलिण्डर विस्फोट भएन र अर्को भवितव्यबाट जोगियो । दोस्रो आगोले पोलेका बिरामीको किड्नी र शरीरमा पानी कम हुने भएकाले पहिलो उपचार स्लाइन पानी दिनु पर्छ ।
साढे २ बजे राती प्रेमिका भेट्न गएका सन्दीप भाग्ने क्रममा ४ तलाबाट खसेर भयो यस्तो हालत
OMG! इतिहाँसमै यति धेरै नाचेकाे देखेकै थिइन, ३ पटक गाउँदा पनि दर्शक अघाएनन… भिडियो सहित